တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတရှီက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ရွေးကောက်ခံသမ္မတ နှင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအပေါ် တယ်လီဖုန်းပြောဆိုဆွေးနွေး - Xinhua News Agency
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့၌ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဖြင့် Binondo-Intramuros တံတား တည်ဆောက်နေသည်ကို မတ်လ ၃ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်သည် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး နှင့် ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မေ ၁၈ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ရွေးကောက်ခံသမ္မတ ဖာဒီနန် ရာမိုဒက်ဇ် မားကို့စ် နှင့် တယ်လီဖုန်း ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။သမ္မတရှီက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ သမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်ခံရသည့်အပေါ် မားကို့စ်အား ထပ်မံချီးကျူးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မားကို့စ်သည် တရုတ်-ဖိလစ်ပိုင်ဆက်ဆံရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက အလေးအနက်ပြောကြားခဲ့ပြီး မားကို့စ်သည် တရုတ်-ဖိလစ်ပိုင် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု တည်ဆောက်သူ ၊ ထောက်ခံအားပေးသူ နှင့် ကမကထပြုသူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Nueva Ecija ပြည်နယ်၌ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအတွက် Philippine-Sino စင်တာ၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် လယ်သမားတစ်ဦးအား မတ် ၂၅ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
“မင်းဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာ မသိဘူးဆိုရင် ဝေးဝေးသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။”ဆိုသည့် ဖိလစ်ပိုင်ဆိုရိုးစကားတစ်ခုကို ကိုးကားပြီး သမ္မတရှီက တရုတ်-ဖိလစ်ပိုင် နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် နှစ်ဘက်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန် နှင့် ၎င်းတို့၏ မူလရည်မှန်းချက်အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က တရုတ်-ဖိလစ်ပိုင် နှစ်နိုင်ငံသည် အထွေထွေအလားအလာများအား ဆုပ်ကိုင်သင့်ကြောင်း ၊ ခေတ်သစ်တွင် တရုတ်-ဖိလစ်ပိုင် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအပေါ် ထည်ဝါခံ့ညားသောဖြစ်စဉ်အား ရေးသားသင့်ပြီး နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတွက် ပိုမိုတောက်ပသောအနာဂတ်အား ကဏ္ဍသစ်တစ်ရပ် ဖွင့်ပေးသည့် အနေဖြင့် နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် အသေးစိတ် အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၆ နှစ်တာအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့သည် ကောင်းမွန်သည့်အိမ်နီးနားချင်းချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအား လိုက်နာစောင့်ထိန်းခဲ့ပြီး ဘုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အတူတကွလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း နှင့် ပြည့်စုံကျယ်ပြန့်သော မဟာဗျူဟာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို ထူထောင်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ထောက်ပြခဲ့သည်။
နှစ်ဘက်သည် ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုများမှတစ်ဆင့် သဘောထားကွဲလွဲမှုများအား ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်စီမံနိုင်ခဲ့ကြောင်း ၊ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် လက်တွေ့ကျသည့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအား တက်တက်ကြွကြွမြှင့်တင်ခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတွင် အကျိုးများသောရလဒ်များ ရရှိခဲ့ကြောင်း သမ္မတရှီက ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းအချက်အလက်များသည် တရုတ်-ဖိလစ်ပိုင် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတွင် နှစ်နိုင်ငံပြည်သူများ၏ ဘုံရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီ ဖြစ်ပြီး နှစ်ဘက်အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် နှစ်နိုင်ငံပြည်သူများ၏ ဘုံအကျိုးစီးပွားကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေသည်ကို သက်သေပြခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်ဘက်က အိမ်နီးချင်းသံခင်းတမန်ခင်းတွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအား အမြဲတမ်းဦးစားပေးခဲ့ပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအပေါ် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသောမူဝါဒအား အဆင်မပြတ်တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်း သမ္မတရှီက မှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနှင့်အတူ အုပ်ချုပ်မှုအတွေ့အကြုံများ ဖလှယ်မှုကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန် ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ ၊ စိုက်ပျိုးရေး ၊ စွမ်းအင် နှင့် ပညာရေးတို့အပြင် COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး နှင့် ကပ်ရောဂါအလွန် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး စသည့် နိုင်ငံစီးပွားရေး နှင့် ပြည်သူများ၏ လူမှုဘဝဖူလုံရေးတို့အပေါ်တွင် အဓိကထားခြင်းဖြင့် ရှိရင်းစွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအား တိုးချဲ့ကာ အားကောင်းလာစေရန် ၊ ကြီးပွါးတိုးတက်မှုနေရာအသစ်ကို အားပေးရန် ၊ ဒေသကြီး နှင့် နှစ်နိုင်ငံ ၏ ရှင်သန်တက်ကြွလာစေခြင်း နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအား မြှင့်တင်ရန် အဆင်သင့်ရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအား စီးပွားရေး နှင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် ထိရောက်သော ပံ့ပိုးကူညီမှုများ အမြဲတမ်းထောက်ပံ့ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတရှီက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် လုံခြုံရေးသည် စိန်ခေါ်မှုအသစ်များဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်နှင့်အတူ ခေတ် နှင့် သမိုင်းသည် မကြုံစဖူးဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ကမ္ဘာကြီး၏ အပြောင်းအလဲများအား ၎င်းက အလေးအနက် ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံလုံးသည် အာရှ၌ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုကာ သမ္မတရှီက နှစ်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် အိမ်နီးချင်းကောင်း ၊ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသော ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် win-win ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား အသားပေးသည့် အာရှမိသားစုတစ်ခုတွင်လည်း အခြေတည်နေခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည် လွတ်လပ်သောနိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်ဟု ၎င်းအနေဖြင့် မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်ဘက်က အရေး ကြီးသောနိုင်ငံတကာ နှင့် ဒေသတွင်း ကိစ္စများအပေါ် ဗျူဟာမြောက် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေး အားကောင်းလာရန် နှင့် ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ အားထား ယုံကြည် လောက်သောအရှိန်အဟုန်ကို ကာကွယ်ရန် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ရန် အဆင်သင့်ရှိကြောင်း သမ္မတရှီက ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
#China #Philippines #XiJinping #Marcos #တရုတ်နိုင်ငံ #ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ #ရှီကျင့်ဖိန် #မားကို့စ် #ဆင်ဟွာ #xinhua #myanmar #xinhuamyanmar
BEIJING, May 18 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping hadaphone conversation with Philippine President-elect Ferdinand Romualdez Marcos on Wednesday morning on bilateral ties and regional development.
CitingaPhilippine saying “If you do not know where you have come from, you cannot go far,” Xi urged both countries to carry forward the friendship of the two sides and stay true to their original aspiration.
China is ready to step up exchanges of governance experience with the Philippines, expand and strengthen existing cooperation withafocus on national economy and people’s welfare in such fields as infrastructure, agriculture, energy and education, as well as the anti-COVID-19 fight and post-pandemic recovery, foster new growth areas and promote development and revitalization of the two countries and the region at large, he said.
Noting that both China and the Philippines are developing countries in Asia, Xi said the two countries’ development is rooted inagood-neighborly and friendly surroundings and also in an Asian family featuring win-win cooperation.
The Chinese side stands ready to work with the Philippines to strengthen strategic communication and coordination over major international and regional issues, and safeguard the sound momentum of peace and development in the region, said Xi. ■
Photo 1 – The China-funded Binondo-Intramuros Bridge is under construction in Manila, the Philippines on March 3, 2022. (Xinhua/Rouelle Umali)
Photo2– A farmer works at the Philippine-Sino Center for Agricultural Technology (PhilSCAT) in Nueva Ecija province, the Philippines on March 25, 2022. (Xinhua/Rouelle Umali)